Ọvelụ Super War na-abịakwute gam akporo n'ụdị beta emechiri | Gam akporosis
Iju Super War na-abịa n'ụdị MOBA gam akporo na beta emechiri
Eluigwe na ala niile kere gburugburu ndị dike ịtụnanya na-abịarute ugbu a na MOBA n'ụdị ya na Marvel Super War na gam akporo na ihe bu beta mechiri emechi na mba di iche iche. MOBA na ụdị nke Njikọ Akụkọ Akụkọ Ochie na nke ahụ ga-anwa ịnweta ọnọdụ ya n'ahịa egwuregwu n'ịntanetị maka egwuregwu mkpanaka.
Na vidiyo anyị na-ekerịta anyị nwere ike chọta egwuregwu nke MOBA a nke ahụ ga-abịa na Android iji duel megide nsogbu ndị ọzọ dị ka Fortnite na PUBG Mobile. Site n'ụzọ o si ele anya, ọ dị ka ọ ga-ekwe nkwa ma na-aga iwetara anyị egwuregwu dị egwu n'ịntanetị na igwegharị anyị.
Kwupụtara site na NetEase, onye nkwusa weputara Durango, na Marvel Entertainment, anyị maara ugbu a abatala beta nke mbụ emechiri emechi. Ndị dike kachasị amasị ụwa, yana ndị ọjọọ ha, site na ịtụnanya Eluigwe na Ala ga-anọ na nnọkọ ikike nke aka ha iji mee ka ndị agbụrụ ha nwee ọ delightụ.
Na vidiyo anyị nwere ike ịhụ oke njedebe ọ nwere na otu esi agbanwe ya n’otu n’ime aha ntanetị nke afọ. Beta emechiri emechi amalitela taa na Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines na India, ọ ga-adị site na taa rue June 10. Ihe karịrị oge zuru ezu iji bulie ahụmịhe egwuregwu ahụ wee mee ya na nsụgharị ikpeazụ na steeti.
Iji nwee ike igwu egwu Super War n'ụzọ dị nkasi obi, ọ dị anyị mkpa, Ekwentị nwere Snapdragon 410, Adreno 306 na 2GB nke Ram. Dị ka ọ dị na betas ndị ọzọ, a ga-ehichapụ data ahụ mgbe oge nyocha a gwụchara.
Ugbu a, ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga - abụ Paygwọ iji merie ihe odide ịzụta, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha ga - agabiga ihe ịchọ mma dị ka ụdị ego. Anyị nwere ike were nke ahụ Supervel Super War ga-ebu ụzọ bịa, Ya mere, kwadebe maka MOBA nke ị ga-eji wepụta obere akpa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Iju Super War na-abịa n'ụdị MOBA gam akporo na beta emechiri
Ntuziaka kachasị mma nke aghụghọ na azịza maka Xiaomi gị
TikTok anaghị akwụsị: ugbu a ọ na - arụ ọrụ na ekwentị iji sonyere Samsung na Huawei